ओली सरकारले गरेका विवादास्पद राजदूत सिफारिस खारेज ! « GDP Nepal
( Wednesday, July 28, 2021)
ओली सरकारले गरेका विवादास्पद राजदूत सिफारिस खारेज !
Published On : 18 July, 2021 12:37 pm
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका झन्डै एक दर्जन व्यक्तिको नाम सरकारले फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ११ मुलुकका लागि राजदूतमा गरिएको सिफारिस खारेज गरेको हो ।
संसदीय प्रक्रिया छलेर गरिएको राजदूत नियुक्ति विवादास्पद बन्दै गएको थियो । सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाए पनि खल्तीका मान्छे नियुक्त गर्दै आएको थियो। खासगरी एमाले नेता युवराज कार्कीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईकी सासुको समेत सिफारिस गरिएपछि सरकारप्रति तीब्र आक्रोश पैदा भएको थियो ।
ओली सरकारले अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मालाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
रसियाका लागि जंगबहादुर चुहान, अष्ट्रेलियाका लागि सुम्निमा तुलाधार, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमित्रा सुवेदी, साउदी अरेवियाका लागि मेराज मुसलमान र बहराइनका लागि युवराज कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उनको सिफारिस नै बदर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी राजदूतसँगै संसदीय प्रक्रिया छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका सबै निर्णय खारेज हुने सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्त सिफारिस भएका सम्बन्धित मुलुकमा ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिसकेको थियो ।
अन्ततः नेपालले पनि फाइजरको खोप किन्ने, १२ देखि १८ वर्षकालाई लगाइने
काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी कम्पनी फाइजरको खोप खरिद गर्ने भएको छ । १२ देखि १८
सीएनआई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाण चौधरीको बाटो क्लियर !
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को उपाध्यक्षमा सात उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । परिसंघका
योजना आयोगमा पौडेल, ओलीले बर्खास्त गरेका प्रदेश प्रमुखको पुनर्नियुक्ति !
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले
व्यवसायीले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने ? कानुन बनाउन सुझाव !
काठमाडौं । व्यवसायीलाई मन्त्री बनाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा यससम्बन्धी कानुन